အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြေးများ ယခုလထဲမှာ နောက်တစ်ခါထပ်ပေးမယ် – CharTake
နိုင်ငံတော်မှ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ပေးအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးများကို ဒီလထဲနောက်တစ်ခါ ထပ်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ အုတ်တွင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုက ပြောပါတယ်။
” တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပေးမှာပေါ့ ။ နှုန်းတော့ အတိအကျ မသိ သေးဘူး။ နှစ်သောင်းထက်တော့ မနည်းတာသေချာတယ် ။ ဒီတစ်ခါတော့ ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို အပြည့်အဝ ရမှာပါ ။ ဒီလထဲပဲပေးမှာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက စတုတ္ထအကြိမ် ထောက်ပံ့ရာတွင်Stay at Home ပြင်ပတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၁) စုလျှင် (၂၀၀၀၀) ကျပ်နှုန်း၊Stay at Home အတွင်းရှိသော အိမ်ထောင်စု (၁) စုလျှင် (၄၀၀၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၆.၁)သန်းခန့်အတွက် ကျပ် (၁၆၃. ၉၀၅ ) ဘီလီယံကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက ထောက်ပံ့ကြေးများ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း စတင်ပေးအပ် ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများကို ငွေ(၂၀၀၀၀) ကျပ်စီ ထောက်ပံ့ခြင်းအား ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်ဘလနှင့် စက်တင်ဘာလ အသီးသီး၌ စုစုပေါင်း(၃) ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅.၇) သန်းအတွက် ကျပ် (၄၀၄.၇၃၅)ဘီ လီယံကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။Source ; Myanmar Harp
Unicode … အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ နိုငျငံတျောထောကျပံ့ကွေးမြား ယခုလထဲမှာ နောကျတဈခါထပျပေးမယျ
နိုငျငံတျောမှ အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ ပေးအပျတဲ့ ထောကျပံ့ကွေးမြားကို ဒီလထဲနောကျတဈခါ ထပျပေးမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျ နိုငျငံတျော ထောကျပံ့ကွေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာ အုတျတှငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဒျေါခြိုခြိုက ပွောပါတယျ။
” တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာနဲ့ ပေးမှာပေါ့ ။ နှုနျးတော့ အတိအကြ မသိ သေးဘူး။ နှဈသောငျးထကျတော့ မနညျးတာသခြောတယျ ။ ဒီတဈခါတော့ ထောကျပံ့ကွေးတှကေို အပွညျ့အဝ ရမှာပါ ။ ဒီလထဲပဲပေးမှာပါ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောပါတယျ။
နိုငျငံတျောအစိုးရက စတုတ်ထအကွိမျ ထောကျပံ့ရာတှငျStay at Home ပွငျပတှငျရှိသော အိမျထောငျစု (၁) စုလြှငျ (၂၀၀၀၀) ကပျြနှုနျး၊Stay at Home အတှငျးရှိသော အိမျထောငျစု (၁) စုလြှငျ (၄၀၀၀၀)ကပျြ နှုနျးဖွငျ့ အိမျထောငျစုပေါငျး (၆.၁)သနျးခနျ့အတှကျ ကပျြ (၁၆၃. ၉၀၅ ) ဘီလီယံကို နိုငျငံတျောအစိုးရက ထောကျပံ့ကွေးမြား နိုဝငျဘာလ အတှငျး စတငျပေးအပျ ထောကျပံ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျဝငျငှမေရှိသော အခွခေံလူတနျးစား အိမျထောငျစုမြားကို ငှေ(၂၀၀၀၀) ကပျြစီ ထောကျပံ့ခွငျးအား ၂၀၂၀ ဇူလိုငျလ၊ ဩဂုတျဘလနှငျ့ စကျတငျဘာလ အသီးသီး၌ စုစုပေါငျး(၃) ကွိမျ ဆောငျရှကျခဲ့ရာ နိုငျငံတျောအစိုးရအနဖွေငျ့ အိမျထောငျစုပေါငျး (၅.၇) သနျးအတှကျ ကပျြ (၄၀၄.၇၃၅)ဘီ လီယံကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။Source ; Myanmar Harp
ဆိုင်ကယ်ပေါ်နွားနို့ပုံးလေးတင်ပြီး သမာအာဇီဝကျစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ဦး